2 Way Fire Hydrant - BaganMart
Heavy Loads Elevator
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 2010 view counts
စြေးနူနျး : 315000 Kyats per Unit(s)
Brand : Kolling
Model : PH 1002-V 5
Outlet :2x 65mm Hydrant Valve with Female Inst. BS 336
Inlet : 100mm PN16 to BS4504
Working pressure : 15 bar (217 psi)
Testing pressure : 22.5 bar (326 psi)
Seat Test Pressure : 16.5 bar (239 psi)
Type :2Way Hydrant
Pressure Type : Low Pressure
Price Validity : 15 days
Terms & Conditions : Cash on Delivery
Delivery : Ex. Stoke Yangon
•	Outlet -2X 65 mm Hydrant Valve with Female Inst. BS336
•	Inlet - 100 mm PN16 to BS4504
•	Body	- Cast Iron
•	Type	- Low Pressure
ကျွန်တော်တို့KGS Myanmar မှရပ်ကွက်တိုင်း မြို့နယ်တိုင်း မီးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ အတွက် လိုအပ်သော2Way Fire Hydrant နှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Fire Hydrant System ကတော့ တစ်မြို့လုံး အနှံ့ ဖြန့်ကျက်ပြေးဆွဲထားတဲ့ မီးသက်ပိုက်စနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ရင် မီးသတ်ကားတွေအနေနဲ့ ရေဖြည့်နေရလို့ အချိန်နောက်ကျတာတို့ ရေကုန်သွားလို့ ပြန်သွားရတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် မီးသက်ကားများရေဖြည့်ဖို့အတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် မီးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ အတွက် လမ်းတိုင်း ဒါမှမဟုတ် မီတာ ၁၀၀ အကွာတိုင်းမှာ Fire Hydrant တစ်ခုစီ ရှိတက်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးတွေထဲမှာလည်း အနည်းဆုံး မီတာ 100 တိုင်းမှာ တစ်ခုစီ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ အန္တရာယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း အမြန်ဆုံးနဲ့အန္တရာယ်အကင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ သင့်အိမ်မီးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့2Way Fire Hydrant တက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ KGS Myanmar ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
For2Way Fire Hydrant
May I get the quotation for "2 Way Fire Hydrant" ?